Sintomy ny Twitter Design Material | Androidsis
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka, fotoana elabe alohan'ny ahazoana amin'ny fomba ofisialy azy ao amin'ny Google Play Store, dia hizara aminareo rehetra izahay ny APK farany ao amin'ny kinova Alpha an'ny Twitter miaraka amina chinks vitsivitsy Material Design Android Lollipop.
Ka raha tianao ampidino alohan'ny olon-kafa ity kinova Twitter vaovao ity miaraka amina fanavaozana hafa hafa noho ny fanavaozana ny fampiharana manaraka mba hanarahana ny torolalan'i Google momba ny famolavolana izay tsy maintsy arahin'ireo fangatahana amin'ny Android, tsy azonao atao ny tsy mahita ny lahatsoratra manaraka, ka fantatrao, kitiho eo "Tohizo ny famakiana" ary hazavainay aminao ny pitsopitsony rehetra.
Inona no tafiditra ao amin'ity kinova Twitter vaovao ho an'ny Android ity?
Raha ny marina momba ny torolàlana Google momba ny Material Design, ity kinova vaovao an'ny Twitter izay misy mivantana ao amin'ny APK sy amin'ny fanjakana Alpha, tsy misy afa-tsy ny fampidirana ny bokotra mitsingevana hanao hetsika hafa toy ny fandefasana Tweet vaovao.
Amin'ny ankapobeny, ity kinova vaovao amin'ny Twitter miaraka amin'ny fanampiana ny bokotra mitsingevana, Tsy mandeha amin'ny fitaovana rehetra na ny tsimbadika amin'ny Android izy io, ary na dia tsy fantatra aza hoe avy aiza ny Android kely indrindra dia ho azo ampiasaina, araka ny fametrahana napetraka amin'ny fitaovana samihafa, mety hampidi-doza ny filazako fa tsy mandeha fotsiny izy io amin'ny terminal misy Android 5.0 Lollipop na kinova ambonimbony kokoa. Mba hamafana ny fisalasalana ary hijerena raha hahomby izany ary hampavitrika ao amin'ny terminal anao ity bokotra fiasa vaovao mitsingevana ity, ny zavatra tsara indrindra dia ny fisintomanao ny APK amin'ity rohy ity ary andramo ho anao.
Raha iray amin'ireo nisafidy ny misintona ianao ary manandrana mijery raha toa ka mandeha izany dia aza hadino ny miala amin'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity, satria Modely terminal Android efa nanandrana ihany koa ve ianao dikan-android ary raha nahomby ny fametrahana ary niseho na tsia io fampiasa vaovao io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » apk » [APK] Sintomy izao ny Twitter miaraka amin'ny tsiro Design Material
Andao hamonjy Elche !!! dia hoy izy:
amin'ny kit kat 4.4.4 dia tsy mandeha
Mamaly an'i Salvemos al Elche !!!
Mandeha amin'ny LG L5 II miaraka amin'ny android 4.1.2
Cristhian Hendrix Patienc dia hoy izy:
Mitovy ihany ny fahitako azy, alohan'ny maha ratsy azy: v
Valiny tamin'i Cristhian Hendrix Patienc